/blog/Gallery/Nootropic Coluracetam: Sida looga Shaqeeyo Maskaxda loona Daweeyo Walaaca
Posted on 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Qoyska Racetam ee Nootropic– Coluracetam
Coluracetam (BCI-540, ama MKC-231) waa nootropic dufan-milma oo ku jira fasalka cunsuriyada ee xeryahooda. Coluracetam ayaa aad uga awood badan asalka cunsuriyadeed, Piracetam. Coluracetam waxaa sharciyeeyay Mitsubishi Tanabe Pharma oo reer Japan ah sanadkii 2005. Ka dhigitaanka mid ka mid ah nootropics-ka ku saleysan cunsuriyada cusub.
Patent-ka loo yaqaan 'Coluracetam' ayaa markii dambe laga iibiyay BrainCells, Inc. oo ku yaal San Diego, California. BrainCells waa shirkad yar oo gaar loo leeyahay, oo ku takhasustay soo saarista daawada jirka kuna takhasustay soo saarista xeryaha loogu talagalay daaweynta xanuunka weyn ee niyadjabka (MDD), niyadjabka u adkeysiga daaweynta (TRD), iyo cudurka Alzheimer
Coluracetam wuxuu la mid yahay qaab dhismeedka Piracetam. Iyo sida dhammaan noocyada racetam nootropics, waxay leedahay pyrrolidone nucleus xuddunta. Cilmi-baaristii ugu dambeysay ee caafimaad waxay muujineysaa suurtagalnimada daaweynta xanuunka niyadjabka, iyo dhaawaca dareemaha indhaha iyo indhaha.
Coluracetam waa mid aad u xoogan choline beegsanaya supplement. Waxay kor u qaadeysaa isbeddelka maskaxda ee maskaxda ee loo yaqaan 'acetylcholine (ACh) iyada oo loo marayo habka sare ee loo yaqaan' choline uptake '(HACU). Taas oo kordhinaysa feejignaanta, feejignaanta faahfaahinta iyo xusuusta.
Qaar ka mid ah cilmi baarista, iyo khibrada shaqsiyadeed ayaa muujineysa in Coluracetam uu saameyn ku yeelan karo soo-dhoweeyaasha AMPA. Ka dhigaya nootropic ampakine kara. Taas oo sharxi karta saameynta kicineed ee la midka ah iyada oo aan la helin dhibaatooyinka soo raaca ee kiciyeyaasha dhaqameed. Coluracetam sidoo kale waxay muujineysaa xoogaa anxiolytic ah (anti-walwalka) sifooyinka ka caawinaya hagaajinta niyadda iyo xasilloonida walaaca.
Sidee Ckaacetam Works(Mashruuca Ficilka)
Sida xeryaha cunsuriyada badankood, coluracetam (CAS:135463-81-9) wuxuu badanaa ka shaqeeyaa heerarka sii kordhaya ee neurotransmitter acetylcholine, taas oo si xoogan ula xiriirta barashada, xusuusta, iyo garashada.
Si kastaba ha noqotee, habka coluracetam u beddelo heerarka acetylcholine waa mid gaar ah. Caadi ahaan, racetams waxay kiciyaan wax soo saarka acetylcholine iyaga oo kicinaya soo-dhoweeyeyaasha ku habboon, laakiin coluracetam waxay sidaas ku sameysaa iyada oo kor u qaadeysa kor u qaadista isku-xirnaanta sare, ama HACU. Nidaamka HACU wuxuu go'aamiyaa xaddiga choline loo soo jiido neerfaha si loogu beddelo acetylcholine.
Marka la kordhiyo xaddiga choline loo soo jiido unugyada dareemayaasha, coluracetam wuxuu dhiirrigeliyaa wax soo saarka acetylcholine wuxuuna keenaa heerarka maskaxda ee neurotransmitter-kan muhiimka ah inuu sare u kaco. helitaanka degdegga ah ee choline qaadashada.
Wadajir ahaan ficilladani waxay horseedayaan heerar sare oo ah acetylcholine, kuwaas oo la xiriira garashada iyo xusuusta kor loo qaaday.
Faa'iidooyinka Oo Raadka Of Coluracetam
❶ Coluracetam wuxuu hagaajiyaa xusuusta iyo barashada
Faa'iidooyinka Coluracetam waxay cadeyneysaa inay ka shaqeyneyso fulinta garashada iyo xusuusta shaqada jiirka iyo saameynta la midka ah ee aadanaha. Brain Cells Inc. waxay sameysay daraasad muujineysa wanaajinta maskaxda jiirka kadib markay heshay AF64A sideed maalmood. Horumarku wuxuu sii waday inuu sii socdo xitaa daaweyn ka badan. cudurka Alzheimers waxay keentaa heerarka hoose ee acetylcholine. Ku kordhinta acetylcholine ee hippocampus, coluracetam waxay kordhin doontaa astaamaha cudurka Alzheimers sida cilladaha waxbarashada iyo xusuusta oo liidata.
❷ Coluracetam wuxuu yareeyaa Niyad-jabka Daaweynta-U Adkeysta
Daraasad lagu sameeyay shakhsiyaadka 101 ee qaba niyad-jabka, oo aan ku guuleysan daaweynta natiijada daawada lidka diiqadda, waxay ku yeelatay saameyn wax ku ool ah horumarka muuqda ee nolosha ee 80 mg 3 jeer maalintii. Si kastaba ha noqotee, tani waa daraasadda kaliya ee aadanaha. Awoodda ay u leedahay inay yareyso walwalka glutamate ayaa laga yaabaa inay mas'uul ka tahay saameynta wanaagsan ee daaweynta niyad-jabka.
❸ Coluracetam Waxay Yareysaa Walaaca
Daraasad jiir ah, qiyaasta 21 maalmood ee coluracetam waxay muujineysaa 20% hagaajinta walwalka, taas oo ka sarreysay saameynta 12% saameynta valium ee hal qiyaas oo isla daraasaddan ah.
❹ Coluracetam Waxay dhiirrigelisaa Neurogenesis
Daraasadaha qaarkood waxay xusayaan inay ka caawiso neurogenesis. Farsamaynta aasaasiga ah wali ma cadda, laakiin waxay la xiriirtaa maamulkeeda dhowr toddobaad, taas oo ku kordheysa acetylcholine aagga hippocampus. '' Patent-ku wuxuu sheegayaa inuu kobcinayo koritaanka unugyada neerfaha (neurogenesis). Farsamadan lama yaqaan, laakiin waxaa loo maleynayaa inay la xiriirto kororka hippocampal acetylcholine markii coluracetam maalin walba la qiyaaso dhowr toddobaad. ''
❺ Coluracetam Waxay ka caawisaa Schizophrenia
Coluracetam wuxuu kordhiyaa waxqabadka ChAT ee jiirka oo leh dhaawaca unugyada neerfaha. Kordhintaani waxay soo jeedineysaa inay ka faa'iideysan karto bukaanada qaba shisoofrani iyadoo loo marayo isla enzyme-kan. Daraasad dheeraad ah oo toos ah oo loogu talagalay dadka qaba shisoofrani ayaa socota.
❻ Coluracetam Waxay xoojisaa aragga indhaha
Coluracetam waxay muujisay awooddeeda indhaha sida aqoonsi midab oo hagaagsan, aragti, iyo muuqaal. Gaar ahaan, waxay dhiirrigelisaa koritaanka neerfaha ee cudurka soo noqnoqda ee isha. Daraasado badan ayaa xusaya aragtida midabka oo wanaagsan iyo fiiqidda aragga, laakiin ma jirto cilmi-baaris cilmiyeed oo xaqiijisay saameyntaas.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee Coluracetam.
Sidee buu Coluracetam uga shaqeeyaa Maskaxda?
Coluracetam waxay kobcisaa caafimaadka maskaxda waxayna u shaqeysaa dhowr siyaabood. Laakiin laba gaar ah ayaa taagan.
Coluracetam wuxuu kobciyaa maskaxdaada'qaadashada choline iyada oo la beegsanayo lana shaqeynayo habka loo yaqaan 'chofin uptake chot uptake' (HACU) ee maskaxda maskaxda.
Acetylcholine (ACh) wuxuu ka kooban yahay choline iyo acetate. Kuwani waa inay diyaar u yihiin terminal-ka neerfaha markasta. Markaa ACh waa la soo saari karaa markasta oo loo baahdo.
Qadarka bilaashka ah ee dhiigga ku wareegaya ayaa ka gudbaya caqabadda maskaxda-maskaxda. Oo waxaa qaada boosteejada 'cholinergic neuron terminal'. Waxaa lagu qaadaa neerfaha iyada oo loo marayo nidaamka qaadashada isku-xirnaanta sare (HACU). Isku-darka ACh wuxuu ku dhacaa dillaaca synaptik. Booska u dhexeeya neur-mareenka sida uu ugu safro neerfaha.
Nidaamka HACU waa heer-kul, tamar, iyo sodium ku tiirsan. Nidaamkani waa habka aasaasiga ah ee choline loogu baahan yahay isku-darka ACh loo raro neerfaha. Waana tilaabada xadeynta heerka ee soosaarida neurotransmitter-kan muhiimka ah.Markuu nidaamkani burburo ama uusan u shaqeyn sidii ugu fiicneyd sidii loogu talagalay, waxaad la kulantaa dhibaatooyin xusuusta, barashada, iyo ceeryaanta maskaxda.
Coluracetam waxay saameyn ku yeelaneysaa howshan waxayna ka caawineysaa inay si hufan ugu shaqeyso. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa inay xoojineyso nidaamka HACU. Xitaa nuurooyinka dhaawacmay. Kordhinta acetylcholine ee neerfaha ayaa ka caawisa hagaajinta xusuusta, waxay kor u qaadaa garashada waxayna siisaa awoodo go'aan qaadasho wanaagsan.
Coluracetam sidoo kale waxay umuuqataa inay hagaajinayso awoodda AMPA. Daaweeyeyaasha AMPA waxaa saameeya glutamate. Kaas oo ka shaqeeya maskaxda iyo habdhiska neerfaha si loo hagaajiyo feejignaanta iyo garashada.
Coluracetam wuxuu la shaqeeyaa labada awood ee AMPA iyo kor u qaadista qashinka. Isku-darkaani wuxuu umuuqdaa inuu gacan ka geysanayo hagaajinta cilladaha niyadda iyada oo aan saameyn ku yeelan heerarka serotonin.
Serotonin Xulashada Reuptake Inhibitors (SSRIs) ayaa ah habka ugu wanaagsan ee hada loo doorto hab caafimaad ee lagula tacaalo xanuunada niyadda iyo niyadjabka. Waxay la yimaadaan liis ay ku qoran yihiin waxyeelo xun. Una shaqeynin bukaan kasta oo niyadjabsan.
Cilmi baarayaashu waxay soo sheegeen in Coluracetam uu faa'iido u lahaa daaweynta niyad-jabka weyn ee caafimaadka iyo jahwareerka walaaca. Iyadoo aan saameyn ku yeelan heerarka serotonin ee maskaxda. Iyo iyada oo aan la helin dhibaatooyinka soo raaca ee carqaladeeya serotonin.
Coluracetam Isticmaalka: Qiyaasta Iyo Isdhaafsiga Tixraac Kaliya
Coluracetam waa isku dhaf aan laga helin cuntooyin kasta jirkeenana ma soo saari karo. Sidaa awgeed, habka kaliya ee lagu soo saari karo faa'iidooyinka molekalkan waa iyada oo la isku daro.
Coluracetam waxaa caadi ahaan lagu iibiyaa budo ama foomka kaabsolka waxaana lagu qaadan karaa hadal ahaan. Qiyaaso sidoo kale waxaa loo qaadan karaa si sublingally (carrabka hoostiisa) si nuugid dhakhso iyo waxtar badan leh.
Maaddaama coluracetam yahay wakiil gaar ah oo awood leh, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo qiyaasta ugu hooseysa ee saameynta. Haddii aad aragto inaad u baahan tahay inaad kordhiso qiyaasta si aad u dareento faa'iidooyinka, tan waa in loo sameeyaa si tartiib tartiib ah waana inaysan ka badnaan 80mg.
Coluracetam waa mid aan sun ahayn waxaana loo arkaa inay tahay mid amaan ah oo si wanaagsan loo dulqaadan karo.Waxaa jira dhowr waxyeelo oo dhif ah oo lala xiriirinayo xarunta, sida walwal, madax xanuun, daal iyo lallabbo. Dhibaatooyinkan soo jireenka ah waa dhif iyo caadi ahaan waxay dhacaan oo keliya marka aysan jirin barkad horudhac ah oo ku filan oo loo yaqaan 'choline' si loogu isticmaalo acetylcholine Avv. Tani waa sababta aan kugula talineyno inaad bilowdo isku-darka isku-darka 'coluracetam' oo leh xoojin heer sare ah sida 'citicoline'.
Coluracetam wuxuu la falgeli karaa daroogooyinka qaarkood, gaar ahaan kuwa la falgala soo-dhoweynta NMDA. Tan waxaa ka mid ah kuwa qufaca joojiya iyo suuxinta. Maaddooyinka kale ee la falgala nidaamka cholinergic, sida daawada glaucoma iyo nikotiinka, ayaa sidoo kale la macaamili kara saameynta coluracetam. Coluracetam waxay ka hortagi kartaa saameynta daawooyinka anti-cholinergic (sida qaar Benadryl, qaar antipsychotics iyo daawooyinka cudurka Parkinson).
Sida wixii dheeri ah, haddii aad daawo qaadato ama aad leedahay xaalad caafimaad oo hoose, waa macquul inaad lahadasho dhakhtarkaaga kahor intaadan bilaabin dhamaystirid nidaam
※ Sida loo galinin Wisagu Wimp Dawooyinka kale
♦ Coluracetam waa molecule ay ku milmaan dufanka, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in lagu dubo dufan caafimaad leh sida qumbaha ama saliidda MCT.
Ura Coluracetam sidoo kale waa in lagu dhejiyaa a gunnada dheeraadka ah sida citicoline. Citicoline wuxuu kordhiyaa barkadda la heli karo ee loo yaqaan 'choline for synthesis'. Xirmooyinka ayaa abuuri kara saameyn xoog leh adoo kordhinaya choline-ka la heli karo (citicoline) iyo awoodda lagu dhex-dhex-geliyo acetylcholine (coluracetam).
※ Qiyaasta Lagu Taliyay: 5-80mg maalintii
Waxaan kugula talineynaa inta udhaxeysa 5-80mg ee coluracetam maalintii.
Xadka sare ee aaminka ah ee coluracetam waa 80mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa inaad la joogto 35mg maalintiiba maxaa yeelay cawaaqibta ka soo baxda qiyaasta sare weli si buuxda looguma baarin aadanaha.
Way fiicantahay in loo qaybiyo daawooyinkan qiyaas subax ama galab ah. Tusaale ahaan, qaadasho 20mg ah 10mg subaxdii iyo 10mg dheeraad ah galabtii.
Sidii hore loo soo sheegay, waa inaad ka bilowdaa dhamaadka hoose ee qiyaasta qiyaasta. Bilawga qiyaasta ugu wax ku oolka yar waxay yareyn doontaa suurtagalnimada khibrad waxyeellooyin aan wanaagsaneyn.
Coluracetam waa mid aan sun ahayn. Marka waxaa loo arkaa mid si wanaagsan loo dulqaatay oo amaan ah. Dad badan oo isticmaala markii ugu horeysay ee Coluracetam waxay soo sheegaan daal taas oo inta badan ah natiijada ka soo bilaabata qadar aad u sarreeya.
Xusuusnow, Coluracetam waxay ku shaqeysaa iyadoo kor u qaadeysa choline-ka maskaxdaada. Choline waa horudhac soosaarka acetylcholine. Haddii aan la heli karin choline ku filan nidaamkaaga, waxaad dareemi doontaa dhibaatooyinka soo raaca.
Madax xanuun ka yimaada isticmaalka Coluracetam caadi ahaan waxay dhacdaa marka aad ilowdo inaad isku darsato kaabayaal wanaagsan oo wanaagsan. Madax xanuun badanaa waa calaamad muujinaysa hoos u dhaca maskaxda ku dhaca maskaxdaada.
Coluracetam waa mid ka mid ah xubnaha cusub ee aan la aqoon ee ku jira fasalka cunsuriyada nootropics, laakiin waa wax la jecel yahay isticmaaleyaal badan.
Waxay kordhisaa heerarka '' neurotransmitter learning '' acetylcholine, oo laga yaabo inay kobciso garashada, iyo daraasaadka xayawaanku waxay muujinayaan inay wax ka beddeli karto maqnaanshaha xusuusta iyadoon wax saameyn ah oo la taaban karo lahayn. In kasta oo ay jiraan wax yar oo cilmi-baaris ah oo bini-aadam ah oo ku saabsan coluracetam, haddana daraasadaha jira waxay muujinayaan inay noqon karto daaweyn qiimo leh oo ku saabsan walwalka iyo niyad-jabka.
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa isku halleeya inay tahay niyad kiciyaha iyo xoojiye xusuusta oo siiya diirad iyo feker wanaagsan. Qaar kale waxay yiraahdaan waxay siinaysaa wax u dhigma "aragti HD", ka dhigaysa midabada midab dhalaalaya, isbarbar dhiga mid aad u kacsan, iyo nalal iftiimaya.
Coluracetam waa qayb awood leh, sidaa darteed qaddarka qiyaasta ayaa hooseeya, waxaana loo yaqaanaa inay dhaqso wax u qabato. Waxaa loo iibiyaa sidii cunto ahaan dhamaystirid gudaha Mareykanka oo sharci ahaan looga soo gelin karo Kanada iyo UK qaddar yar.
Weli wax badan ayaa laga baran karaa coluracetam, laakiin waxay umuuqataa inay badbaado u tahay inta badan isticmaaleyaasha markii si masuuliyad leh loo qaato. Haddii aad xiiseyneyso inaad ku darto wax cusub oo ka duwan kanaga istaabasho nootropic, coluracetam wuxuu noqon karaa mid laga fiirsado.
Coluracetam ma laha qadar ballaadhan oo cilmi-baaris ah, daraasadaha la heli karo waxay muujinayaan awood weyn oo loo adeegsado. Waa mid ka mid ah cunsuriyadaha ugu dambeeya ee socda, ee barbar socda Fasoracetam. Si kastaba ha noqotee, dhowaan, FDA waxay ansixisay qaab "xoojin ah" oo ah Fasoracetam daaweynta ADHD.
 Brauser D. "Isku-darka Neurogenesis-kicinta Waxay Muujinayaan Ballanqaadka Daaweynta Murugada Weyn" Warka Caafimaadka Medscape Sebtember 21, 2009
 Murai S., Saito H., Abe E., Masuda Y., Odashima J., Itoh T. "MKC-231, kor u qaadista korniinka, waxay hagaajineysaa maqnaanshaha xusuusta iyo hoos u dhaca hippocampal acetylcholine oo ay sababtay ethylcholine aziridinium ion ee jiirka." Joornaalka Gudbinta Neural Qaybtiisa Guud. 1994; 98 (1): 1-13.
 Takashina K., Bessho T., Mori R., Eguchi J., Saito K. "MKC-231, xoojiye koronto kor u qaadis ah: (2) Saamaynta isku-darka iyo sii deynta acetylcholine ee jiirka AF64A lagu daaweeyay." Joornaalka Gudbinta Neural (Vienna). 2008 Jul; 115 (7): 1027-35.
 Bessho T., Takashina K., Eguchi J., Komatsu T., Saito K. "MKC-231, kor u qaadista qalabka korin-qaadista: (1) garasho garasho oo muddo dheer socota kadib maamul soo noqnoqday jiirka AF64A la daweeyay." Joornaalka Gudbinta Neural (Vienna). 2008 Jul; 115 (7): 1019-25.
 Akaike A., Maeda T., Kaneko S., Tamura Y. "Saamaynta badbaadada ee MKC-231, oo ah dhiirrigelin sare oo kor u qaadista xayeysiinta ah, oo ku saabsan glutamate cytotoxicity-ka xididdada neerfaha ee dhaqanka leh." Joornaalka Jabaaniiska ee Farmashiistaha. 1998 Febraayo; 76 (2): 219-22
 Shirayama Y, Yamamoto A, Nishimura T, Katayama S, Kawahara R (Sebtember 2007). "Soo-gaadhista ku xigta ee kor u qaadista korriinka 'MKC-231' waxay ka soo horjeeddaa cilladaha habdhaqanka ee 'phencyclidine' iyo hoos u dhaca septal cholinergic neurons ee jiirka". Yurub Neuropsychopharmacology. 17 (9): 616–26.
 Deeqaha Mashruuca Daaweynta Daaweynta Daaweynta ee Gobolka Kaliforniya, IRS.gov.
 Malykh, AG, & Sadaie, MR (2010). Dawooyinka Piracetam iyo Piracetam-Like. Daawooyinka, 70 (3), 287-312.
Curcumin Derivative J-147 Treat AD, Anti-gabowga, Cudurka Murugada (MDD)	Dawooyinka La Bartilmaameedsado Ibrutinib: Maxaad Ka Ogtahay